जेठ ०५ गते बिहीबारको तपाईको दैनिक राशिफल - PLA Khabar
जेठ ०५ गते बिहीबारको तपाईको दैनिक राशिफल
2022-05-19 2022-05-19 plakhabar
श्री शाके १९४४ ग्रीष्म ऋतु नलनामक संवत्सर नेपाल सं. ११४२ वि.सं. २०७९ ज्येष्ठ ५ गते बिहीबार तद्अनुसार सन् २०२२ मे १९ तारिख ज्येष्ठ कृष्णपक्षको चतुर्थी तिथि मूल नक्षत्र ९ः३७ पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र साध्य योग बब करण आनन्दादिमा धूम्र योग चन्द्रमा धनु राशिमा भ्रमणशील रहला । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ५ः१५ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १८ः४७ मा हुनेछ ।
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ): दिन मिश्रित खालको छ । आज द्विविधामा परिने र निर्णायक क्षमतामा कमी आउने योग छ । र काममा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिन्छ । शत्रुहरूको चलखेल बढ्नाले केही अप्ठ्यारोमा परिएला । मित्रजनको साथ प्राप्त हुनेछ । नयाँ सम्भावना देखापर्ने छ । आरोग्य वृद्धि हुनेछ भने कार्यमा सफलता प्राप्त होला । ऋण, रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । सानातिना समस्यासँग त्रास मान्नु उचित नहोला ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो): व्यस्तता बढ्नेछ । आशा उत्साह थपिनेछ । सन्तानसुख मिल्नेछ । उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । कृषि तथा पशुपालनमा त्यति लाभ नभए पनि व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुने योग छ । भूमि तथा मातृधनबाट लाभ मिल्नेछ । विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्न मौका छ । बौद्धिक र रचनात्मक काममा सफलता मिल्नेछ । रसरागमा आकर्षित हुनुहुनेछ । मान पुरस्कार प्राप्ति हुनेछ । भोज भतेरमा भाग लिनुहुनेछ ।
मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह): समय शुभ फलदायक रहनेछ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछ । नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ । धार्मिक तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापबाट प्रतिष्ठा पाइनेछ । धैर्यले काम लिनुुपर्ला । आरोग्य वृद्धि हुनेछ । नयाँ सम्भावना देखापर्ने छ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । सफलता प्राप्त हुनेछ । कार्यगति वृद्धि हुनेछ । प्रयासरत काम बन्नेछ ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो): व्यस्तता वृद्धि हुनेछ । स्वास्थ्य कमजोर तर जिम्मेवारी ज्यादा आइपरेको अनुभूति होला । बाध्यतापूर्ण काममै समय बित्न सक्छ । सहयोगको आशा देखाउनेहरूबाटै धोका पाइएला । ऋण, रोग र शत्रुमाथि ध्यान दिनुपर्ने छ । खर्च बढ्नेछ । कठोर परिश्रमले काम बन्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ ।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे): आफ्नो काममा अरुको भर पर्दा धोका हुन सक्छ, आफै प्रयत्न गर्दा काम सम्पन्न होला । प्रयास गर्दा रोकिएका कार्य बन्नेछन् । केही मात्रामा खर्च बढ्नेछ । आलस्य जाग्नेछ, जागरुक रहनु हितकर होला । नयाँ काममा सफलता मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्नेछ । मिठो भोजन र मित्रजनको साथमा रमाएने अवसर जुर्न सक्छ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो): भागदौड व्यस्तता बढ्नेछ । जोखिममा नपर्नु हितकर हुनेछ । कठोर परिश्रमले काम बन्नेछ । खर्च बढ्नेछ । उत्साहमा कमी आउला । मातापिता र आफन्तको सहयोगले काम बन्नेछन् र विशेष लाभ उठाउन सकिनेछ । दाम्पत्य जीवन सुखद बन्ने देखिन्छ । काममा अरुको भर नपर्नु हितकर हुनेछ ।
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते): प्रेमबल बढ्नेछ । आर्थिक प्रगति होला र मनमा सन्तुष्टि पनि मिल्नेछ । अरूका काममा महत्वपूर्ण समय बित्न सक्छ । समयमा काम पूरा नहुनाले खिन्नता बढ्ला । सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा मिल्ने समय छ । उद्योग तथा व्यापारमा सामान्य फाइदा मिल्नेछ । मान सम्मानमा निरन्तर वृद्धि भइरहनेछ । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने सामर्थ्य बढ्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बलियो बन्नेछ ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु): समय मिश्रित फलदायक रहला । विवादमा पर्नुबाट बच्नुहोला । स्वास्थ्यमा कमजोरी र परिश्रम धेरै गर्नुपर्ने समय छ । तापनि काममा सफलता मिल्नेछ । भाग्योन्नतिको समय छ । अप्रिय समाचारले खिन्नता बढ्न सक्छ । आरोग्यता बढ्ला । ऋण रोग र शत्रुमाथि ध्यान राख्नुपर्नेछ । लगानी वृद्धि हुनेछ । भोग विलासमा आकर्षण बढ्नेछ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे): भागदौड वृद्धि हुनेछ । रोकिएको काम बन्नुको साथै लगानी उठाउन चाहेमा सफल रहनुहुनेछ । विभिन्न अवसर पाइने समय छ तर सोचेको काम समयमा सम्पादन गर्न नसकिने र अवसर फुत्कने सम्भावना देखिन्छ । काममा केही चुनौती देखिए पनि समयको सदुपयोग हुनेछ । धेरैले सहयोगको तत्परता देखाउनेछन् । दैनिक काममा सफलता मिल्नेछ । सुख समृद्धि बढ्नेछ । विवादमा नपर्नु बेस होला । मिहीनेतयुक्त काममा रूचि वृद्धि होला । अरुको भर नपर्नु नै हीतकर रहला ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि): आशा उत्साह बढ्ला । नसोचेको काम बन्न सक्छ । धैर्यले काम लिने समय छ । छरछिमेकमा भने केही असमझदारी बढ्ने योग छ । तापनि, प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ । सन्तान वा अनुयायीले प्रसन्नता दिलाउनेछन् । रसराग प्रेममा सफलता मिल्नेछ । आफन्तको साथ मिल्नेछ । कार्यमा सफलता मिल्नेछ । अरुको भर नपरी आफ्नै बलविवेकले कार्य गर्नु हितकर रहनेछ ।
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द): प्रयासरत काम बन्नेछ । समय उत्साहवर्द्धक रहला । नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । पितृधन समेत लाभ हुनेछ । दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ । देखापरेको समस्याको समाधान मिल्नेछ । मान प्रसंशा बढ्नेछ । शुभ समाचार प्राप्त होला । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्ला । आरोग्यता बृद्धि होला । यात्रापरक काममा सफलता प्राप्त हुनेछ ।
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि): आरोग्यता बढ्ला । सुख शान्ति बढ्नेछ । मनोकूलको काम बनेर मन प्रसन्न रहनेछ । सामाजिक कामको दायित्व बढ्नेछ । अरूका जिम्मेवारी समेत वहन गर्नुपर्ला । प्रतिष्ठित काम र पदको आशा देखाउनेहरूले धोका दिन सक्छन् । प्रयत्न गर्दा गोप्य रहस्य पत्ता लगाउन सकिनेछ । तर, सानातिना काम र घरेलु समस्यामा अल्झनुपर्ने समय छ । सुखको वस्तुको लागि धन खर्च गर्नु हुनेछ । पराक्रम बढ्नेछ ।